China Capsule PET အပြာရောင်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Qianduo ထုပ်ပိုး
1. မြင့်မားသောအထီးကျန်ထုပ်ပိုး။ မြင့်မားသောအထီးကျန်ခြင်းထုပ်ပိုးသည်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေငွေ့များကိုထိန်းချုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအထီးကျန်မှုနှင့်အတူပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ထိရောက်မှုကိုသေချာစေရန်အထုပ်ထဲသို့အနံ့၊ အလင်းစသည်ဖြင့်ပါရှိသည်။ မြင့်မားသောအထီးကျန်ထုပ်ပိုးဥရောပနှင့်ဂျပန်အတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံသည် PVDC နှင့်အခြားမြင့်မားသောအထီးကျန်ခြင်းထုပ်ပိုးမှုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်းတိုးတက်မှုနှေးကွေးသည်။ ထို့ကြောင့်မြင့်မားသောအထီးကျန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးများ၏ကြီးထွားမှုတရုတ်အတွက်မူးယစ်ဆေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုး၏အဓိကလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်၏
၂။ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု၏သန့်ရှင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်ကို GMP ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစီစဉ်ထားသော်လည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဆေးညွှန်းပုံစံမမြုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်အတွက် GMP လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမူးယစ်ဆေးဝါးထုပ်ပိုးမှုအတွက်ပacterိဇီဝဆေးများပေါ်လီမာထုပ်ပိုးပစ္စည်းများကိုလက်ခံသင့်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုး;
3. "အစိမ်းရောင်" ထုပ်ပိုး။ “ အစိမ်းရောင်” ဆေးဝါးများထုပ်ပိုးခြင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေသောထုပ်ပိုးခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများသည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ISO1400 စံသတ်မှတ်ချက်အရ "အစိမ်းရောင်" ထုပ်ပိုးခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်လာသည်။ အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးထုပ်ပိုးပစ္စည်းများဖြစ်သောပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ သဘာဝသို့ပြန်ခြင်း၊ စက်နှိုးခြင်းနှင့်လေထုညစ်ညမ်းခြင်းမရှိခြင်းတို့ကိုအသစ်တီထွင်။ ယေဘူယျအားဖြင့်အခမဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်သည်။
4. လျော့နည်းတိုင်းတာခြင်းထုပ်ပိုး။ လျော့နည်းမီတာထုပ်ပိုးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အတွင်းထုပ်ပိုးမီတာရလဒ်များနှင့်တစ်ကြိမ်စားသုံးထုပ်ပိုးနှင့်အတူထုပ်ပိုးပစ္စည်းများလျှောက်လွှာအပါအဝင်တစ် ဦး အချိန်အတိုင်းအတာအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာ၏တိုင်းတာမှု၏ function ကိုရှိသည်လိုအပ်သည်, အဆုံးစွန်သောလျော့နည်းမီတာထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တစ်ကြိမ်တည်းသောထုပ်ပိုးမှုကို ၁၉၉၀ တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပေါင်းစပ်သောပစ္စည်းများတိုးတက်လာခြင်းနှင့်ဇွန်ထုပ်ပိုးခြင်းနည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူတရုတ်သည်အရည်နှင့်ခိုင်မာသောတစ်ကြိမ်ထုပ်ပိုးမှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုထိရောက်စွာအာမခံနိုင်ခဲ့သည် သေးငယ်တဲ့တိုင်းတာခြင်းထုပ်ပိုးကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, အဆင်ပြေပြီးတိကျသော။
၅ ။ ဒါခေါ် "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာထုပ်ပိုးခြင်း" ဆိုသည်မှာထုပ်ပိုးခြင်းတွင်ရှိသောဓာတ်ငွေ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကာလရှည်ကြာစွာထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုအာမခံပေးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အပူချိန်လျှော့ချခြင်း (အောက်စီဂျင်စုပ်ယူနိုင်သော) နှင့်ထုပ်ပိုးထားသောထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်လေထုအတွင်းရှိအစားထိုးပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်အဆာ, etc) ။
6. Aseptic ထုပ်ပိုး။ "Aseptic" ထုပ်ပိုးခြင်းသည်ဇွန်နည်းပညာကိုသေစေနိုင်သောချက်ချင်းအပူချိန်မြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဇွန်ကိုသတ်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကို aseptic ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထုပ်ခြင်း၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများမကြာခဏထုပ်ပိုးများအတွက် extrusion နှင့်ပေါင်းစပ်မှို၏ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးထုပ်ပိုးခြင်းကိုလွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများသည်ထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သောဆေးဝါးများသည်တူညီသောနှင့်ဆင်တူသည်ဟုလက်ခံသည်။ ထုပ်ပိုးဒြပ်စင်။ ဥပမာအားဖြင့် Blister Pack သည်စီးရီးထုပ်ပိုးမှုသို့ရောက်ရှိရန်ပန်းကန်အရွယ်အစားနှင့်လူမီနီယံသတ္တုပါးပုံ၏ပြောင်းလဲမှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ တရုတ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် OTC ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် serial Packaging ကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားလာပြီးနောင်အနာဂတ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးမှု၏အလားအလာကိုလည်းပြသလိမ့်မည်။
7. Nano ထုပ်ပိုး။ ဆေးဝါးနယ်ပယ်၌နာနိုနည်းပညာနှင့်နာနိုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းသည်တရုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးထုပ်ပိုးမှုအတွက်ရွှေအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ nanopaper, ပိုလီမာအခြေစိုက် nanocomposites (pnmc), nanoadhesives နှင့် nanoantimicrobial ထုပ်ပိုး၏ကြီးထွားမှုမူးယစ်ဆေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးအသစ်သောဒေသများဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့သို့ Capsule ပုလင်း PET အနက်ရောင်
နောက်တစ်ခု: Capsule ပုလင်း PET ဘရောင်း